Amakhandlela omnyaka omusha anezandla zawo
Amakhandlela akhona cishe kusukela ngesikhathi sokuqala kwempucuko. Njengoba sonke sikhumbula kusukela emfundweni yomlando, okokuqala umlilo wawungumuntu onesidingo esiwusizo, okudingeka ukuba agcinwe ubusuku nemini. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, ubuhlobo babantu abanengqondo abanezici ze-recalcitrant buye kwaphuthuka, kungashiwo ukuthi izinhlangano ezikhulayo kanye nemilingo yemvelo sezibe abangane. Kancane kancane, ngaphezu kwama-bonfires aqhakazile emaphandleni kwavela amakhandlela okwenziwa ngaleso sikhathi ngamafutha ezilwane, futhi kanye nabo bangena izibani zokuqala zangaphakathi "zangaphakathi".
Ekuqaleni, lezi zindawo zazingamatshe kuphela, kamuva - ezihlukahlukene zesekeli zethusi nezinye izinsimbi.
Unyaka omusha usondela futhi ungazama ukwenza izibani zokukhanyisa iziNyaka Zonyaka.
Bazohlobisa noma yikuphi okuyizinto ezingaphakathi kwezitayela. Amakhandlela ngokubukeka ngezindlela eziningi athembele ebusweni babandulela kwabo kusukela ezikhathini zasendulo. Abaqambi banamuhla basebenzise ngempumelelo imibono yabase-Etruscans, abamele imiphakathi yasendulo, kanye nempumelelo ye-Renaissance. Nakuba kunjalo, ubuchwepheshe bekhulu lama-20 leminyaka lisivumela ukuba sibone izinketho eziningi ezithakazelisayo. Isibonelo, manje ekwakhiweni kwezibani zezibani umuthi utholakala - kudingeke ukuthi uhlanganiswe ngophethiloli olungenakuvutha umlilo. Kuyiqiniso ukuthi isidleke samakhandlela kufanele sibe sesinsimbi.
Uma unqume ukwethula amakhandlela ezenziwe ngezandla zakho eNkabeni Yonyaka Omusha, zikhululeke ukubhekana nalolu daba. Kudingekile kuphela ukufaka umcabango - futhi izivakashi zendlu yakho ngoNyaka Omusha zizoshaqeka futhi zithandeke umphumela! Isibonelo, uma kugubha umkhosi, lapho uzogubha khona wonke umuntu ngamathalenta e-cultinary, bonisa ukuthi ekhishini unamandla okwenza izinto ezibucayi: ukuphazamisa izibani zamakhandla kusuka ... inhlama kanye ne-oven-omisiwe. Ungaxuba ufulawa ngemibala yokudla yemibala eminingana.
Ngaphandle kokungabaza, ingaphakathi lothando lugcwaliswa ngokuphelele ngamakhandlela ahambayo, aqobo kakhulu. Zingenziwa ezigodini ezivela ku-walnuts. Vele uthele ku-wax noma i-gel encibilikile, faka ama-wicks, uyikhanyise bese uyivumela ukuba ifinyelele esitokisini se-candy dish noma isaladi. Ama-Shells, of course, ungakwazi futhi udinge ukuklama imibala yakho, gcoba emaphethelweni ngobuhlalu obucwebezayo noma emaphethini wepeyili enemibala - ngokujwayelekile, yini ezofika engqondweni. Isiqu esikhwameni esinjalo sisuswe esikoleni sokuqala, futhi igobolondo elilungiselelwe lingasetshenziswa kabusha ngangokunokwenzeka.
Futhi kuthiwani uma ufuna ukwakha isimo samahlathi ashisayo, izifiso ezingavamile nezeningizimu efulethini? Ngokuqinisekile uzozama ukukhazimulisa ukuhlobisa igumbi lokuphumula ngesitayela esifanele: amaphephadonga enesithombe sezitshalo ezimangalisayo, umshini njengesikhumba sezingwe, izithombe ezihlukahlukene ze-bamboo, izithelo ezingavamile emabhasikisini aqoshiwe ...
Ake ucabange ukuthi zihambisana kahle kanjani izibani zezibani zangaphakathi zonyaka omusha ngesimo sezithelo, okufana nalezi zikibha - isithelo samagilebhisi, i-orange, i-pamela! Ungazenza wena, uhlanza imfucu ye-citrus bese uyomisa izikhumba kancane elangeni. Iziqukathi eziphelile zigcwele u-wax, hhayi ukukhohlwa ukufakelwa - futhi voila! Futhi uma ubambelela ngokucophelela ngaphandle kwalezi zibani zokukhanyisa izimpaphe eziyinkimbinkimbi, umphumela uzoba mkhulu kakhulu. Ngesinye isikhathi, lapho ukuvutha amakhandlela azungeze ekamelweni kuzosakaza ukunambitheka kwesithelo esimnandi.
Akunqatshelwe ukusebenzisa imibono yabadwebi abahola kule nkambu lapho benza izibani zokukhanyisa "ekhaya". Ucabanga ukuthi ingaphakathi lezinhlanga zezibani ze-Blue Nature ezidalwe ngokucophelela ekhaya zizothunga kahle, yiziphi amatshe ahlukene? Ukuze uthole ukwaziswa, kufanele nje uhambe ogwini, futhi uqhubeke - ibhizinisi lobuchwepheshe! Futhi izivakashi eziza kuwe ukuhlangabezana noNyaka Omusha nawe ziyomangala kakhulu ngalokho okungewona izibani zokukhanya ezikhanyayo ezijwayelekile ezisetshenziswe ngaphakathi kwakho. Jabulela umsebenzi wakho futhi uhlangane kahle noNyaka Omusha.
Indlela yokugcina imikhiqizo ngendlela efanele?
Indlela yokusakaza kancane kancane isabelomali somndeni
Yini ongayinika intombazane ngo-Mashi 8?
Indlela yokunqoba ubuvila bakho
Indlela yokusika i-jeans ngaphansi kwe-shorts
Yini ongayibona ngonyaka we-Blue Horse
I-Appetizer evela kuma-aergergini
Indlela yokugeza izandla zakho ngokufanele
Amathiphu wamahhala wamahhala
Okroshka kwi-beet broth
Ukubaluleka Kokuzwela Ekuthuthukiseni Ingane
Amakhambi omphakathi we-angina pectoris
Imbewu ye-Chia, i-juniper pekmez ne-lukuma powder: imikhiqizo emisha yobusha bakho nobuhle bakho
Vula endlini yangasese
Ikhekhe le-Blueberry "isiFinnish"
Usuku lokuqala lokuzalwa kwengane